လူသားအားလုံးအတွက်: လူ နှင့် ဖေ့စ်ဘုတ်
တိုးတက်ကြီးပွားလိုပါကလည်း လျှော့ရမှာ ဖဘ. ။ တို့ကတော့ဘလော့မှ ဘလော့. ပိုပြီးပြတိုက်ဆန်တယ် ကြိုက်သမျှတင် tag စရာမလိုဘူး ဘလော့ rollမှာတက်တယ်။။
ကိုကိုလတ် (ကြောင်ဖြူများရှင်) said...
ခွေးပုံကြောင်ပုံတွေ တင်တယ် ဆိုတာ ငါ့ကို တိုက်ရိုက် စော်ကားတာ... ဟင်းဟင်း.. ရေးသူ ဘယ်သူတုန်း ပြောလိုက်စမ်း.... ရှင်းရမယ် ဒီကိတ်စ မရှင်းလို့ ဂိုမဖြစ်ဘူး ... :D :D :D
ကြောင်ဖြူများရှင်ရေ...အဲဒါခက်တာပဲ...ကူးတဲ့သူတွေက နံမည်ထည့်မပေးလိုက်ဘူး... ငါတို့လို ပြန်မျှသူတွေက အလကားနေရင်း မျက်နှာပူနေရတာဟေ့... အခု ဒီစာပုဒ်ကို မေးလ်က သုံးလေးစောင်ဝင်တာတောင်... ရေးသူကို မတွေ့မိသေးဘူး။ ငါတို့ကလည်း ဖတ်ပြီး သဘောကျတာလေးတွေ ပြန်မျှတာပါကွာ... ရေးသူနံမည်မပါတော့ အားနာတာတော့ အမှန်ပဲ။
Posted by thwin naung Soe bar
ရေးသူကို ပြောပေးပါ၊ အစ်မရဲ အောဂျက်တစ်နဲ့ ညီတာလေး မပါလို့ စိတ်မကောင်းဖြစ်နေသဟ :(
(သူများတွေ ရေးထားတာလေးတွေကို စိတ်ဝင်စားရုံသက်သက်သာ၊ ပြုံးမိရုံသက်သက်သာ)အဟိ
သူတစ်ခုကျန်ခဲ့တယ်....တချို့က ဖေ့ဘွတ်ကို စစ်မြေပြင်
ဟုတ်ပါတယ်..စစ်မြေပြင်ဆိုတာတောင်မှ တစ်ချို့က ခံတပ်ကိုအမှန်အကန် မြင်တယ်မဟုတ်လား။